Usayizi 41.7 MB
Play 30 602
Umbhali: Bheka ifayela Readme - Model and textures IFDG
Enye indiza kahle acatshangelwe nge sound namaqiniso futhi esibonelweni esiphelele (ngiyabonga IFDG) nemininingwane yaso kulencane. A mzuzu weqiniso kwenjabulo! (Unyaka 2005)
I A319 kuyinto version mfushane ye A320. Featuring the ophendulayo efanayo futhi okufanayo kaphalafini umthamo kodwa nge nomgibeli esingaphansi kuka A320, abagibeli 124 ukuzimela yayo ngo 2 amakilasi ukucushwa km 7200, esikhulu kunazo zonke emndenini. I A320 futhi A319 indiza kukhona ukudayiswa best of the A320 Family. Uhambo lokuqala i A319 kwenzeka ku 24 August 1995, izitifiketi Jaa nokubeka kwenziwa nge Swissair ngo-Ephreli 1996.